Yintoni endimele ndiyenze xa umntu ecela ukuba ndibhatale ngaphandle kwewebhusayithi ye-Airbnb? | Indawo Yoncedo yeAirbnb
Ukuba izicwangciso zakho zohambo zitshintshile ngenxa yeCOVID-19, ungatshintsha okanye urhoxise ukubhukisha kwiphepha lakho lohambo.
Yintoni endimele ndiyenze xa umntu ecela ukuba ndibhatale ngaphandle kwewebhusayithi ye-Airbnb?
Sukubathumela imali, yaye sazise. Asoze sikucele ukuba ubhatalele nantoni na kwenye isayithi, kwenye idilesi okanye kwenye into engengo-Airbnb.
Ngamanye amaxesha kusenokufuneka ubhatale irhafu yasekuhlaleni kumbuki zindwendwe wakho, kodwa oko kubhatala kufuneka kwenziwe kuphela kwa-Airbnb, ibe kumaxesha amaninzi iqukwa kwiindleko zokubhukisha. Funda okungakumbi
Ukuba ubhatale ubhukisho lwakho ngaphandle kwenkqubo ye-Airbnb (ngokomzekelo uthumele ngebhanki okanye nge-elektroniki), usenokuba ubhatele ubhukisho lobuqhetseba. Ukufumana uncedo, Sazise ngokukhawuleza.
Ukuba awuqinisekanga, unako ukukhangela enoba ubhukishe nge-Airbnb na.
Xela izicelo zokubhatalisa kwezinye isayithi
Ukuba umbuki zindwendwe we-Airbnb ukucela ukuba ubhatale kwenye isayithi okanye kwenye inkampani, sichazele
Awusoze ufumane iphepha okanye i-invoyisi eyiPDF kumbuki zindwendwe okanye kwa-Airbnb ikucela ukuba ubhatale. Baxele ababuki zindwendwe abasebenzisa oku: i-Western Union, i-MoneyGram, i-cashier's check, i-money order, i-Liberty Reserve.
Yiya kwiMiyalezo yakho kwi-airbnb.com ucofe kwincoko enomyalezo okukrokrisayo
Kulo myalezo, cofa uphawu lweflegi
Khetha isizathu sokuxela lo mntu, uze ucofe Okulandelayo
Ukuba awufuni kuphinda uqhagamshelane nalo mntu, cofa indawo ethi Ewe, ungaphinde uqhagamshelane nam
Ukuba ufumana i-imeyili kungakhathaliseki ukuba ithunyelwe ngubani (noba ivela kwidilesi yomtshini we-airbnb, okanye kwidilesi yomntu osebenzisa u-airbnb) ikucela ukuba ubhatale okanye wamkele intlawulo kungekhona kwisayithi yakwa-Airbnb, sazise ngokukhawuleza.
Ungaze ubonise ngedilesi yakho ye-imeyili ngaphambi kokuba ubhukisho luvunywe okanye uthumele imali ngaphandle kwenkqubo ye-Airbnb, ibe zijongisise ii-imeyili ekuthiwa zisuka kwi-Airbnb.
Imizekelo yobuqhetseba obuqhelekileyo iquka:
Ubuqhetseba bokubhatalisa kuqala: Umntu uthi uza kukubhatala okanye akunike into ethile ukuba uqala ngokubhatalela inkonzo ngaphandle kwe-Airbnb.
Ubuqhetseba be-imeyili zomgunyathi: Umntu ukuthumelela i-imeyili okanye ilinki ebonakala ngathi yeyase-Airbnb okanye kwenye isayithi ethembekileyo. Le miyalezo yenzelwe ukukukhohlisa ukuze uhambise ngenkcazelo eyimfihlo njengeephasiwedi okanye ezinye iidilesi ze-imeyili. Imiyalezo yobuqhetseba ingaquka i-malware, esona sixhobo esinobungozi esithi xa singene ekhompyutheni yakho siqokelele inkcazelo yakho yobuqu kuquka iiphasiwedi.
Ubuqhetseba bohambo: Umntu ukuthembisa ukunika indlu entle ngexabiso eliphantsi ukuba uqale uthumele idiphozithi nge-elektroniki. Emva kokuba befumene imali yakho, abasakuniki ubhukisho abakuthembise lona.
Ubuqhetseba bokubhatalisa kakhulu: Umntu uthembisa ukubhatala umbuki zindwendwe ixabiso elingaphezu kolu lobhukisho, aze acele umbuki zindwendwe amnike imali eyongezelelekileyo kwixabiso lobhukisho.
Ubuqhetseba bokubhukishelwa ngomnye umntu: Umntu uthembisa ukukubhukishela aze akubhatalele indlu yakwa-Airbnb ngenye iwebhusayithi okanye inkonzo kuba esithi unesaphulelo kwa-Airbnb. Olu bhukisho ludla ngokubhatalwa ngamakhadi etyala abiweyo.
Phawula: Nakuphi na ukubhukishwa okwenziwa ngaphandle kwe-Airbnb kophulaImimiselo yethu yenkonzo. Ukuba sifumana ubhukisho olwenziwe ngenye inkonzo engeyiyo eye-Airbnb, singalurhoxisa olo bhukisho size siyivale i-akhawunti yomntu owenze olo bhukisho nondwendwe.
Ndingazi njani ukuba i-imeyile okanye iwebhusayithi nhyani yeyakwa-Airbnb?